स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको यात्रा - AahaSanchar
Home आहा बिचार स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको यात्रा
स्वतन्त्र राजनीतिक समूह हालसम्म कुनै पार्टी होइन, यो एउटा राजनीतिक वैचारिक समूह मात्र हो । विगतमा हामीले मात्र मधेशकेन्द्रित राजनीति गरेर मधेशको समस्याहरु समाधानका लागि लड्यौं । तर, त्यसमा सफल हुन सकेनौं । हामीले मधेशको मुद्दालाई समाधान गर्न क्षेत्रीय राजनीति गरेर हुँदैन, राष्ट्रिय तवर समाधान गर्न सक्छौं । किनकि मधेशको मुद्दा, समस्या मधेशको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको हो भन्ने कुरा अँगीकार गर्न आवश्यक छ । हामीले अहिलेसम्मको राजनीति यात्राबारे समीक्षा गरेका छौं । निर्वाचनपश्चात् हामीले पहिलो भेला गरेका हौं । हाम्रो भेलालाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले बडो चासोका साथ हेरेका छन् । हाम्रो भेलालाई होइन, आफ्ना आन्तरिक विवादका कारण धेरै आत्तिए, राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा तरंग आयो । अब स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले के गर्छ भन्ने कुरामा सबैको चासो देखिएको छ । जो साथीहरू हाम्रो भेलाका कारण आत्तिएका छन्, म नआत्तिन आग्रह गर्छु । किनभने यो हाम्रो नितान्त आन्तरिक समीक्षा थियो ।
देशमा विद्यमान विभेद, शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य, सार्थक संघीयताको कार्यान्वयन, संविधानमा आवश्यक संशोधन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक अंगमा पहुँच, नागरिकता समस्या समाधान गर्न, देशको मुख्य मेरूदण्डको रूपमा रहेका किसानको समस्या समाधान गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विभेदलाई समाप्त पार्ने लगायतका विषयमा हाम्रा छलफल केन्द्रित रह्यो । यी समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ स्वतन्त्र राजनीतिक समूह प्रतिबद्ध रह्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । हामीले कृषि प्रधान देश भन्छौं तर किसानका समस्या जहाँको तहींँ छ । त्यसैले हामीले देशको समसामयिक समस्याहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौं । यसबाट कोही आतिनुपर्ने आवश्यक्ता छैन ।
हाम्रो भेलामा हरेक विषयमा गम्भीररूपले छलफल भएको हो । जहाँसम्म नेकपामा प्रवेश गर्ने कुरा छ, त्यस विषयमा पनि व्यापक छलफल भयो । हाम्रो आगामी राजनीतिक यात्राबारे तीन वटा कुरा आयो । पहिलो विकल्प, यो राजनीतिक समूहलाई एउटा पार्टीको रूपमा लाने । दोस्रो विकल्प, यो राजनीतिक समूहलाई अभियानकै रूपमा लैजाने र तेस्रो विकल्प, यदि कुनै पार्टीमै प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नेकपालाई पहिलो प्राथमिकता दिने । किनभने, यो हाम्रो नैतिकता पनि हो । हामीले निर्वाचनका बेला तत्कालीन वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर एमालेको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा होमिएका थियौं । जसमा कतिपय ठाउँमा जनताले हामीलाई निर्वाचित पनि बनाए । तत्कालीन गठबन्धन जनताबाट अनुमोदित भएको थियो । अहिले नै नेकपामा प्रवेश गर्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका छैनौं । हामीले वार्ता र संवाद अहिले पनि जारी नै राखेका छौं ।
हामीले नेकपासँग सार्थक वार्ता गरिरहेका छौं । हामी समायोजनका पक्षमा पनि छौं । नेकपाका नेताहरू हामीलाई समायोजन गर्न आतुर छन् । चाँडोभन्दा चाँडो समायोजन चाहेका छन् । किनभने हामीले जुन अपजस लिनुपर्ने थियो त्यो पहिला नै लिइसक्यौं । नेकपाका साथीहरू स्थायी कमिटी, पोलिट् ब्युरो, प्रदेश, जिल्ला र नगर कमिटीहरूमा हाम्रा साथीहरूलाई समायोजन गर्ने विषयमा सहमत पनि छन् । हृदयेश त्रिपाठी, ईश्वर दयाल मिश्र, वृजेश गुप्ता, पशुपति दयाल मिश्र लगायतलाई मात्र समायोजन गरेर मधेशमा नेकपा बलियो हुँदैन । मदन भण्डारीको जुन सोच र विचार थियो त्यसमा कहीँं न कहीँं तत्कालीन एमाले चुकेको हो । मदन भण्डारीको विचार, प्रतिवेदन, सोच मधेशप्रति यदि अगाडि बढ्यो भने नेकपा मधेशमा स्थापित हुनसक्छ । अहिले पनि मधेशमा कांग्रेसको ठाउँ सुरक्षित नै छ । त्यसरी नै नेकपालाई पनि बलियो उपस्थितिका लागि नेतृत्वलाई केही बुँदाहरू दिएका छौं । त्यसमा उनीहरूको पनि सहमति नै छ । हामीसँग भइरहेको वार्तालाई छिट्टै नै सार्थकरूप दिन्छौं ।
संघीयता बिनाको अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधान नेपाली कांँग्रेसले नै ल्याएको हो । जुन विभेदकारी संविधानको विरोधमा मधेशमा त्यत्रो आन्दोलन र सयौंको सहादत भयो । यसको दोषी हामी जसलाई बनाए पनि यहाँ अस्थिरता ल्याउने काँंग्रेस नै हो । त्यसकारण मुलुकमा एमालेले संकट ल्यायो भनेर भन्न मिल्दैन । एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्तिले चोट पुगेको हो तर, अस्थिरता ल्याउने कांँग्रेस नै हो । हामी खाली एमालेलाई दोषी बनाउने र कांँग्रेसलाई ‘क्लिनचिट’ दिने ? मुख्य दोषी भनेको कांँग्रेस हो, सहदोषी अरू कोही होला । रणनीतिगत रूपमा एमालेलाई मधेशमा बदनाम गराइयो भन्नुभन्दा पनि सबभन्दा बढी दोषी काँंग्रेस हो । त्यसमा एमाले पनि चुकेकै हो ।
हामीले विगतमा विश्वमै नजिर स्थापित हुने आन्दोलन ग¥यौं । हामी मात्र पहाडी–पहाडी वा मधेशी–मधेशी भनेर केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं । जबसम्म हामी नेपाली भएर यसको समाधान खोज्दैनौं तबसम्म यो एउटा मुद्दाको रूपमा मात्रै रहिरहन्छ । चुनावका बेला चर्को भाषण गरेर दुई चार सिट जित्ने अनि काठमाडौंमा आएर बार्गेङ्गि गर्ने अहिलेसम्मको अवस्था देखिएको छ । मधेशी दलका नेताहरू बडो राम्रा राम्रा नाराहरू दिए, एउटा सपना देखाए, त्यही सपनाको भरमा आन्दोलन भयो । मधेशका एक जना क्रान्तिकारी नेताले त संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भनेर सपना देखाए । अहिले के संविधानमा संशोधन वा पुनर्लेखन भइसक्यो जसकारण सरकारमा गएका छन् ? त्यो कुरा जनताले बुझिरहेका छन् । त्यसकारण अब बेबकुफ बनाउने काम नगरौं । धेरै साथीहरूलाई शहीद बनाइयो, तर आजसम्म त्यसको उपलब्धि के भयो ? यति ठूलो आन्दोलनको अन्त्य कहाँ गएर भएको हो ? यसको बारेमा कुनै चर्चा भयो मधेशमा ? नेताहरूले किन विसर्जन गरे ? जो वास्तविक आन्दोलनकारीहरू छन्, उनीहरू अहिले क्षुब्ध छन् । त्यसकारण अब सपनाको खेति नगरौं, अब विपनामा आऔं ।
हाम्रा पूर्वपार्टी राजपा नेपालको अवस्थाबारे हामीले केलाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । राजपा नेपाल एक थान पार्टी हो र त्यसको ६ थान मालिकहरू छन् । विगतमा अहिलेका राजपा भनौं वा फोरमलाई एक मधेश एक प्रदेश चाहिएको थियो, त्यो उनहिरूले पाइसकेका छन् । त्यही दृष्टिकोणले हामीले हेरिरहेका छौं । मधेशका अन्य जिल्लाको विषयमा उनीहरूलाई चिन्ता हुन्थ्यो भने प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशको स्थानीय निर्वाचनमा किन सहभागी भएनन ? अहिले आठ जिल्ला पाएर मख्ख छन् । हाम्रो दृष्टिकोणमा राजपा र फोरम प्रदेश २ मा मात्र सीमित छन् । मधेशका आठ जिल्लाका मात्र यिनीहरु संघर्ष गरे, चुनाव लडे र अहिले सरकार पनि बनाएका छन् । प्रदेश २ मा पनि केही व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित छन् ।
हामीमाथि पनि प्रदेश ५ को चिन्ता रहेको मात्र भनेर आरोप लाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता बुझ्नुपर्छ । हामीसँग मात्र प्रदेश ५ का साथीहरू छैनन् । हामीसँग प्रदेश १, २, ७ लगायत सम्पूर्ण मधेशका मान्छे छन् । यहाँसम्म कि पहाड र हिमालका साथीहरू पनि हामीसँग छन् । हामीले निर्वाचनमा अन्य प्रदेशहरूमा उम्मेद्वार उठाउने सम्भावना भएन । यदि यो पार्टी बन्यो भने हेर्नुहोला कहाँ–कहाँका मान्छेहरू छन् । यदि नेकपामै समायोजन भयो भने हेर्नुहोला हामीसँग कहाँ–कहाँका मान्छे गएका छन् । यो त पछि हेर्ने कुरो हो ।
चाँडोभन्दा चाँडो हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं । किनभने हामीसँग तीनवटा विकल्प खुल्ला छन् । हामी नेकपामै प्रवेश गर्नका लागि लालायित पनि छैनौं । भर्खरै नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेको छ । अब उनीहरूसँग भेटेर एउटा सार्थक वार्ता गरी निष्कर्षमा पुग्छौं । हामीले बुझाएका मुद्दामा उनीहरूले ठोसरूपमा प्रस्तुती देखाए भने प्रवेश गर्छौं । होइन भने त हाम्रा आगामी राजनीतिक यात्राका लागि अन्य विकल्पतर्फ लाग्छौं । (कुराकानीमा आधारित) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Previous post बैराक्यौ बैराक: ह्याँती गर्ने कुरा
Next post प्रथम थबाङ गाउँपालिका कप उद्घाटन भोली
भलिबल प्रशिक्षणका सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण